I-villa yaseGeorgia kufuphi neTartu
Aardla, Tartu County, Estonia
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRobert
Silinde wena kufutshane neTartu, kumasipala waseKastre, kwifama yaseGeorgia. Kwindlu yelizwe-uhlobo lwendlu yelizwe, unokuphumla emahlathini asecaleni kwesixeko, apho unokudlala ngaxeshanye imidlalo kumaziko akufutshane, uphonononge ubomi behlathi okanye ucwangcise uhambo oluya eTartu nakumazantsi e-Estonia. Ngaphezu kwako konke, indlu yeendwendwe yindawo entle kwiintsapho ngenxa yobume bayo noxolo.
Ulindelwe yindlu ephindwe kathathu epholileyo, enayo yonke into oyifunayo ukuze uphile kwaye ukhululeke-iTV enkulu yokubukela iimuvi, isitulo esijingayo sokufunda iincwadi ezilungileyo, indawo yomlilo, ikhitshi elincinci elinayo yonke into oyifunayo, igumbi lokulala kunye neendawo zokulala. enebhedi yesofa yokutsala kunye nebhedi ethambileyo yokulala. Isidlo sakusasa ngentlawulo eyongezelelweyo. Sikwanikezela nge-sauna yombhobho ngentlawulo eyongezelelweyo!
Le ndlu ikwiyadi yefama, ijonge kwisakhiwo esikhulu.
Iziko lezemidlalo laseVooremäe lilindele abakhenkethi kumasipala waseKastre, apho kulungile ukutyibilika kunye nesileyi ebusika kunye nokuhamba ngeenyawo ehlotyeni, iikhilomitha ezimbalwa ukusuka apho lelona ziko lezemidlalo elikhulu laseLange kwiBaltics kunye neMyuziyam yeAviation.
Umbindi weTartu yimizuzu eli-15 yokuqhuba, kwaye imbonakalo yedome yaseMazantsi e-Estonia sele ilindele ukufunyanwa kwelinye icala, imizuzu engama-30 ukusuka apho.